श्रीमान् झर्को मान्दै भन्छन् आखिर तिमी दिनभर गर्छौ के ? - सुसूचित नेपालको चित्र: Onlinepana
श्रीमान् झर्को मान्दै भन्छन् आखिर तिमी दिनभर गर्छौ के ?
कार्यथलोबाट फर्किएपछि श्रीमान् कराउँछन्, ‘खै, एक कप चिया बनाऊ त ।’ श्रीमतीले हतार/हतार चिया बनाएर ल्याइदिन्छे । सोफामा ढल्किएर तात्तातो चियाको चुस्की लिदै गर्दा श्रीमान् सोध्छन्, ‘मेरो मोबाइलको चार्जर खोजेर चार्जमा राखिदेऊ ।’ कुनै आज्ञाकारी बालक झैं‌ श्रीमतीले त्यसै गर्छिन् । त्यसपछि उनी बालबच्चाका लागि नास्ता बनाउन थाल्छिन् ।
श्रीमान् भन्छन्, ‘ए, टिभीको रिमोट कहाँ राख्यौं, एकछिन समाचार हेर्नुपर्‍यो ।’श्रीमती जुठो भाँडार्वतन उठाइरहेकी छिन् । उनले श्रीमान‍्को कुरा सुनेर पनि नसुने झैं गर्छिन् । श्रीमान् कराउँछ, ‘टिभीको रिमोर्ट कहाँ छ भनेको ?’
खासमा महिलाहरू नै खानपानको काममा, घर सजावटको काममा, बालबच्चा हुर्काउने काममा पोख्त र सिपालु हुन्छन् । त्यसैले घर-धन्दाको काम उनीहरूलाई सुम्पिएर घर-व्यवहारको काम पुरुषहरूले सम्हाल्ने गर्छन् । वास्तवमा यो पारिवारिक तालमेल मिलाउनकै लागि गरिएको कामको बाँडफाँट हो त्यसो त कतिपय दम्पती दुवै पेसाव्यवसायमा आबद्ध छन् र उनीहरू घरभित्रको काम पनि मिलिजुली गर्छन् ।
आखिर जे भए पनि पारिवारिक तालमेल मिलाउनका लागि श्रीमान् र श्रीमतीले आ-आफ्नो जिम्मेवारी, कर्तव्य पूरा गर्नैपर्‍यो ।धेरैजसो अवस्थामा के देखिन्छ भने श्रीमान‍्हरू घर बाहिरको काम गर्छन् । पेसा–व्यवसायबाट राम्रै आयआर्जन गर्छन् । परिवारकै सुख र सम्पन्नताका लागि उनीहरू दिनरात खटिन्छन् ।
यद्यपि उनीहरू के सोच्छन् भने, परिवारको सम्पूर्ण भार आफूले मात्र थामिएको छ। अर्थात‍् घरखर्च जुटाउने, घर व्यवहार धान्ने र आयआर्जनको काममा लाग्नु मात्र काम हो ।जबकि घरभित्रका ती तमाम काम गर्नु आफैँमा सहज हुँदैन । परिवारको स्वादअनुसार सागसब्जी तयार गर्नु, खाना पकाउनु, बालबच्चालाई र परिवारलाई ख्वाउनु, जुठोभाँडा सफा गर्नु, कुचो लगाउनु, लुगाफाटो मिलाउनु, बालबच्चालाई विद्यालयका लागि तयार गर्नु, श्रीमान‍्को सरसामान तयार गरिदिनु ।
खासमा गृहिणीले यन्त्र झैं यी सबै काम चुपचाप गरिरहेका हुन्छन् । तर श्रीमान् भन्छन्, ‘आखिर तिमी दिनभर के गर्छौ ?’जसै लकडाउन भयो, श्रीमान‍्हरूको कामधन्दा ठप्प भयो । उनीहरू घरभित्रै बसे । बालबच्चा, श्रीमान्-श्रीमती सबै एकसाथ बसे ।
यस अवधिमा कतिपय श्रीमान‍्ले त्यही काम गरे, जो अरूबेला श्रीमतीले गर्थिन् । सम्भवत: उनीहरूले बुझे होलान्, घरधन्दाको काम सम्हाल्नु पनि सानो काम होइन ।एउटी गृहिणीले घरधन्दाको काम कति कुशलतापूर्वक सम्हाल्छिन् ? परिवारको स्वास्थ्य र सुखका खातिर कसरी आफूलाई भुल्छिन् ? भात पकाउनु, भाँडावर्तन माझ्नु, कुचो लगाउनु, लुगा धुनु यी सबै अनुत्पादक झैं लाग्ने कामहरू हुन् ।
आफू फ्रेस हुन नपाउँदै हतार–हतार चिया पकाउने । छोराछोरीका लागि नास्ता बनाइदिने । विद्यालयको लुगाफाटो तयार गरिदिनुपर्‍यो ।चिया पिउँदै सब्जी केलाउने, काट्ने । खाना पकाउनुपर्‍यो । सबैलाई खाना पस्कने, ख्वाउने। छोराछोरीलाई स्कुलसम्म पुर्‍याउने।
सबैलाई खाना दिएर जुठो भाँडावर्तन सफा गर्‍यो । कुचो लगायो । ओछ्यान मिलाइदियो । बालबच्चालाई सुतायो । त्यसपछि पनि कहाँ ढुक्कले बस्न पाउँछन् र ?झ्याल-ढोका राम्ररी लगाएको छ-छैन ? खानेकुराहरू छोपछाप गरिएको छ-छैन ? धोएर सुकाएको लुगाफोटो बाहिर नै पो छ कि ?
तैपनि श्रीमान् भन्छन्, ‘तिमी काम चाहिँ के गर्छौ ?’साथीसँगी भन्छन्, ‘घरमै बस्ने मात्र हो, अरू काम गर्दैनौ ?’आफन्त-इष्टमित्र भन्छन्, ‘घरमा बसिरहँदा दिक्क लाग्दैन, केही काम गर्नु नि ।’
शनिवार, मंसिर ६ २०७७१२:०९:५३
योग: कहिले र कसरी सुरु भयो ?
ट्वाइलेट सोचेर वाशिङ मेशिनमा पसेपछि !